Ahịa gị na-agbaso Template | Martech Zone
Kedu atụmatụ gị ọgụ na-agbaso n'ahịa ahịa? M na-atụ ụjọ na anyị na-ada ada… nzute na a atụmanya na mgbe ahụ na-eleghara ịgbaso ma nọrọ n'elu nke uche. Ọ bụ usoro siri ike ịbanye na ebe yana ezigbo ihe kpatara itinye ego na CRM na ngwa ahịa dị ka ndị ahịa anyị na Salesvue.
AhịaBridge bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na idozi ọdịiche dị n'etiti ahịa na ahịa iji melite ikike nke ụlọ ọrụ iji mepụta ụzọ ka mma ma mechie ha. Ha mepụtara ihe omuma a na-akpọ, Ndụmọdụ 9 maka Otu esi agbaso ụzọ dị iche iche, nke na-enye ezigbo ndebiri ndebe maka nlekota nzụlite na ịgbaso.
Etu esi eso ụzọ dị iche iche
Iji Big Data ịmụta banyere ndu gị.
Họrọ nke ọma metrics.
Zaghachi ngwa ngwa na-eduga.
Jikwaa ya kọntaktị mbụ.
Jiri email ndu nurturing.
Soro mgbe ndu gi bu dị njikere ikwu okwu.
Tinye ego na ezigbo Ihe CRM.
Tụlee enyemaka sitere na mpụga.
Nye ndụmọdụ maka free.
Tags: sochiebụru ndu ishieduga infographicndu nurturingna-eduzi nzụlite infographicna-azụlite yaahịa ahịaahịa na-eduga infographic
Mee 15, 2015 na 11: 13 AM